Mac, iPhone uye iPad kutengesa kuri kuramba kuchiderera. Apple zvemari mhedzisiro | Ndinobva mac
Mazuva maviri pamberi pekuratidzwa kweiyo nyowani Macbook modhi, iyo Cupertino-based kambani yakaratidza mhedzisiro yezvemari yekota yekupedzisira ya2016, inoenderana nemwedzi waChikunguru kusvika Gunyana. Munguva yekota yekupedzisira kambani yakaona sei mari yavo yadonha kusvika pamadhora mazana mapfumbamwe nemazana mana emadhora nepo mabhenefiti akadonha zvakare zvichienzaniswa nenguva imwecheteyo yegore rapfuura, yakamira pamamiriyoni mazana mapfumbamwe emadhora. Munguva imwecheteyo yegore rapfuura Apple yakawana mari yakawandisa yemamiriyoni mazana mashanu ane makumi mashanu emamiriyoni emadhora uye mabhenefiti emamiriyoni gumi nezana emadhora.
Panyaya yekutengesa kwechigadzirwa, takaona chimwe chinhu icho vaongorori uye Apple pachayo yakanga yatove vazivisa. Apple ini ndakatengesa mamirioni makumi mashanu neshanu e-iPhone mukota ino yekupedzisira panguva imwechete yegore rapfuura yakatengesa mamirioni makumi mana, izvo zvaireva kudonha kwe5%. Kana isu tikataura nezve iyo iPad, zvinoita sekunge kudonha kwakadzikama zvishoma uye kudonha kwekutengesa kwasvika 6%, kuenda kubva 9,8 mamirioni muna 2015 kusvika 9,2 muQ4.
Kana isu tikataura nezve maMac, isu tinoona kuti kudonha kwave kwakakura kupfuura kudonha kwekutengesa kwainge kwafanotaurwa. Mac yekutengesa iri pasi pe14% mugore rimwe chete, kubva pamamiriyoni mashanu emamiriyoni ezvikamu zvakatengeswa panguva imwecheteyo gore rapfuura kusvika kumamiriyoni mana ezviuru akatengeswa. Musangano wemhedzisiro unotevera uchave kupera kwaNdira uye kwatichakwanisa kuona kana shanduko dzakatangwa muMacBook Pro renji dzinobvumidza kukunda kutengesa kuri kuraswa nekambani munzvimbo dzekupedzisira.
Kana tikaputsa mari nenyika, tinogona kuona kuti purofiti yakawanikwa neApple muUnited States yadonha sei ne7, nepo muChina kutengesa kwakadonha neinoshamisa 30%. Zvese muJapan neEurope kutengesa kwawedzera ne10 ne3 zvichiteerana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Mac, iPhone uye iPad kutengesa kuri kuramba kuchiderera. Apple zvemari mhedzisiro